အိမ်မှာအကူအညီ | Holmbygden.se
ထိတွေ့ဆက်ဆံ “Fixar'n” ကျဆုံးခြင်းဒဏ်ရာကာကွယ်တားဆီးဖို့. ဆက်ဖတ်ရန်.
Fixar'n အိမ်ပြန်လာနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများသို့မဟုတ်ချို့ယွင်း function ကိုနေသောသူတို့ကိုကူညီပေးသည်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုဘာမျှမကုန်ကျ. လက်စွပ် 070-191 61 21.
ဥပမာသင်သည်အကူအညီနဲ့ရနိုင်: အင်ဆူလင်ကုထုံး, ဒဏ်ရာများဆေးထည့်, မျက်စိပေါက်များနှင့်ဆေးဝါးခွဲဝေမှု. ဆက်သွယ်ရန် / သတင်းအချက်အလက်များ: မြှို့နယ်ရဲ့ switchboard 060-19 10 00.
မူလစာမျက်နှာအကူအညီအိမ်တွင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ပုံစံအတွက်တစ်ထောကျပံ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်မကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့အရာများအတွက်နေအိမ်စောင့်ရှောက်မှုရနိုင်. ဆောင်းဦးရာသီ မှစ. 2012 ဖြစ် အိမ်မှာစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ရွေးချယ်မှု.
အဆိုပါအပြောင်းအလဲနဲ့ယူနစ်လက်ခံအုပ်စုတစ်စု: 060-19 25 50.
အနီးဆုံးဒေသခံနေအိမ်စောင့်ရှောက်မှု, Liden: 0692-101 36.
သငျသညျန်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, မကြာခဏခေါ်တော်မူ “အိမ်ထောင်စုန်ဆောင်မှုများ”. အိမ်ထောင်စုန်ဆောင်မှုများအဘို့, သငျသညျအလုပျသမား၏ထက်ဝက်ကုန်ကျစရိတ်မှာအခွန်နုတ်နိုင်ပါတယ်. သင်လုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနှင့်တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုအမိန့်.
အစားအစာကိုအပ်အိမ်ပြန်ရနျလိုအပျ, ကချက်ပြုတ်ဖို့ကူညီဒါမှမဟုတ်မုန့်ညက်နှင့်အတူကူညီ? သင်တို့အဘို့အမြှို့နယ်ရန်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်သောသူအပေါင်းတို့သည်. Delivery ကုန်ကျစရိတ် (2012) 250SEK / လ.
မီးဖိုပေါ်မှာ timer နေရာမှာရှိသည်ဖို့ကိုလည်းချက်ပြုတ်အခါပန်းကန်မေ့လျော့ဖို့စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်. ထိုသို့သောအကူအညီအကဲဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲ installed ရနိုင်.
Sundsvall မြူနီစီပယ် 060-19 10 00.